Posted by kai on Jul 26, 2017 in Contributor, Columnist, Education, Myanmar Gazette |4comments
ယခုလမှာ Structure လေးတွေကို ခဏမေ့ထားပြီး punctuation လို့ခေါ်တဲ့ comma, period , semi – colon တို့အကြောင်း လေ့လာကြရအောင်။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာပေလေ့လာသူတိုင်း စိတ်ဝင်စား ကြတဲ့၊ သုံးလိုကြတဲ့ comma လေးကို ကြည့်ကြရအောင်။ comma လေးဟာ တခါတရံမှာ အမှန်တကယ်အရေးပါပါတယ်။ အရင်လက ဖော်ပြခံရတဲ့ adjective phrases လေးတွေကို ကြည့်လေ။ တခါတရံမှာ comma လေးနဲ့ သုံးပြီး တခါတရံမှာ comma လေးတွေ မပါမှ မှန်ပါတယ်။ ဥပမာ – “Peter, living with his parents, works for Cisco .”
” The man living with his parents works for Cisco.”
ပထမဝါကျမှာ Peter လို့ဆိုကတည်းက ဘယ်သူ့ကို ပြောမှန်းသိနေပြီဆိုတော့ living with his parents ဆိုတဲ့ phrase လေးဟာ Non – identifying ပါ။ ဒီတော့ comma လေးတွေထည့်ပေးထားရပါတယ်။ အဲဒီဒုတိယ ဝါကျမှာတော့ living with his parents ဆိုတဲ့ phrase လေးမပါရင် မည်သူကိုဆိုလိုမှန်းမထင်ရှားတဲ့အတွက် Identifying ဖြစ်နေသည့်အတွက် comma လုံးဝမထည့်ရပါ။ အလားတူပါပဲ။ adjective clause လေးတွေ မှာလည်း comma လိုတဲ့ adjective clause နဲ့ comma မလိုတဲ့ မထည့်ရတဲ့ adjective clause ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိတာ မှတ်မိကြမှာပါ။ ဥပမာ “Sarah, who loves the NLD, isafreedom fighter.” “The woman who loves the NLD isafreedom fighter.”
ပထမဝါကျမှာ Sarah လို့ဆိုကတည်းက ဘယ်သူ့ကိုပြောမှန်းသိနေပြီဆိုတော့ who loves the NLD ဆိုတဲ့ clause လေးဟာ Non – Identifying ပါ။ ဒီတော့ comma လေးတွေထည့်ပေးထားရပါတယ်။ အဲ ဒုတိယဝါကျမှာတော့ who loves the NLD ဆိုတဲ့ clause လေးမပါရင် မည်သူ့ကိုဆိုလိုမှန်း မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ Identifying လေးပေါ့။ ဒါကြောင့် comma လေးတွေ ထည့်ပြီးမသုံးရပါဘူး။ ဒီလိုပါဘဲ comma လေးတွေထည့်ပြီးသုံးမှ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဝါကျလေးတွေရှိပါတယ်။လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ comma လေးတွေကိုမထည့်မိခဲ့ရင် တော်တော်လေးကို ကိုးယိုးကားယားဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ”Let’s eat , grandpa.” “Let’s eat grandpa”
ပထမဝါကျမှာ comma လေးကို grandpa ရဲ့ရှေ့မှာ ထည့်ထားလိုက်တော့ ” အဖိုးရေ ထမင်းစားကြရအောင် ” လို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့။ တယ်လိမ်မာတဲ့မြေးလေးပေါ့။ စာရေးသူရဲ့ မြေးလေး Baby Zeiya ကို တောင်သတိရမိသေးတယ်။ ဒါပေမမယ့် ဒုတိယဝါကျမှာလို comma လေးကို ထည့်ဖို့မေ့သွားခဲ့ရင်တော့ အဖိုးအတွက် ကျောချမ်းစရာကြီးပေါ့။”အဖိုးကိုစားရအောင်ဟေ့” ဆိုတော့ ဒုက္ခလှလှတွေ့ပြီပေါ့။ ဘယ်နှယ် ဘီလူး လေးးတွေမွေးထားတာလားလို့ ထင်မှတ်စရာဖြစ်လေပြီင်္။ တကယ်တော့ အထက်က နမူနာဝါကျလေးတွေ adjective clause နဲ့ adjective phrase လေးတွေကြောင့် လေ့လာသူအများစုက comma ကိုသိပ်ပြီးသုံးတတ် ကြတယ်။ လိုအပ်တာထက်ကို ပိုပြီးသုံးတတ်ကြတယ်။ မြန်မာစကားတခုရှိတယ်လေ။ တန်ရင်ဆေး လွန်ရင်ဘေးတဲ့၊ comma လေးတွေလည်း ဒီအတိုင်းပါဘဲ။ လိုအပ်ရင်တော့ သုံးပါ။ မလိုအပ်ပဲ သုံးမိကြတာများတယ်။ ဒီအခါ အမှားအယွင်းတွေပြင်ကုန်ကြတာပေါ့။ comma လေးတွေကို ကျောင်းသူကျောင်းသားအများစုက period လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာအများစုက full stop လို့ခေါ်တဲ့ ဝါကျအဆုံးမှာတွေ့ရတဲ့ ” “လေးတွေအစားသုံးတတ် ကြပါတယ်။ ဥပမာ – ” She went to the market, she boughtalot of groceries for the family.”
“He has many hobbies, he loves horseback riding and bowling.”
ဒီဝါကျတွေမှာ comma ကို period နဲ့အစားထိုးလိုက်မှ မှန်သွားပါတယ်။ comma သည်ဝါကျ ၂ ခုကို ဆက်မပေးနိုင်ပါ။ comma အစား period ကိုသုံးမလား သို့မဟုတ် conjunction လို့ခေါ်တဲ့ and, but. so စသည် စကားလုံးလေးများနှင့် ဝါကျ ၂ ခုကို ဆက်ပေးမလား ဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မည်။ ဒီလို comma ကိုမှားယွင်းစွာသုံးပြီး ရေးတတ်ပြောတတ်သည့်အတွက် Grammer book တော်တော်များများမှာ comma splices လေးတွေ အကြောင်း chapter တခုအမြဲလိုလိုပါစမြဲပါ။ အလျဉ်းအားဖြင့် comma သုံးတာကိုလျော့ပါ။ period သုံးဘာကို တိုးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ comma ဆိုတာ တကယ်တော့ စကားပြောရင်းလေကုန်သွားလို့ ခဏရပ်ဆိုင်းတဲ့ သဘောပါ။ အင်္ဂလိပ်လို pause လို့ခေါ်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ စကားပြောတဲ့အခါ ခတ္တခဏရပ်ဆိုင်းနေရင်နားထောင်ရတာ တမျိုးကြီးဖြစ်နေသလိုပါပဲ။ စာရေးတဲ့အခါ comma အသုံးများလွန်းရင် မချောမွေ့ပါဘူး။ မလှပပါဘူး။ တမျိုးကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ comma သုံးတာကိုလျော့ပါ။ comma သုံးတာလျော့ period လေးတွေသုံးတာကိုတိုးပြီး သုံးပေးပါ။ အရေးအသားချောမွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ Inverted comma ဆို တာကတော့ စကားပြောတာလေးတွေကိုဖော်ပြလိုရင် သုံးရပါတယ်။ ဥပမာ ” The general said, I want the best for my family.”
“Aung San Su Kyi said, I want what is best for my country.”
ဒီ Inverted comma လေးတွေကို Dialog လို့ခေါ်တဲ့ စကားပြောခန်းအားလုံးမှာ အသုံးပြုရပါတယ်။ အဲ တချို့လေ့လာသူများက semi -colon လေးတွေ အသုံးပြုတတ်ကြသေးတယ်။တကယ်တော့ semi -colon လေးတွေဟာ period လေးတွေကိုယ်စားအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။စာရေးသူကတော့ Semi -colon သုံးတာ အားမပေးပါဘူး။ မလိုအပ်ဘူးထင်လို့ပါ။ Semi -colon ကိုလုံးဝမသုံးဘဲ စာအုပ်တအုပ်မှာ ကြုံကြိုက်လို့ Kiss formula လေးအကြောင်း ပြောပြပါရစေ။ ပညာရှင်တဦးက ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံး ဒီ Kiss formula ကို သိသင့်သိထိုက်တယ်၊ သုံးလည်းသုံးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားသင့်တယ်ဆိုပဲ။ မှန်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားကို လွယ်လွယ်ကူကူလေးပြောတတ် ရေးတတ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တကယ်မကျွမ်းကျင်သူများဟာ ဝါကျအရှည်ကြီးတွေ ရေးတတ်ကြတယ်။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားကြီးတွေ ပြောတတ်ရေးတတ်ကြတယ်။ တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာရေးဆရာကြီး Hemingway ဆိုရင် ဝါကျတိုတိုလေးတွေကို ထိထိမိမိသုံးတက်လို့ Literature မှာ Nobel ဆုကြီးတောင် ရလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ သိပ်ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင် comma အစား Dash(-) လေးတွေသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -“Aung San Su Kyi – the beloved leader of our nation – is respected by the whole world.” ဒီလို dash လေးတွေကို တခါတရံသုံးပေးရင် ဝါကျလေးတွေတောက်ပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ comma လေးတွေ မြင်နေကျဖြစ်နေသူများအတွက် အထူးအဆန်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ထားပါတော့လေ။ နိဂုံးအနေနဲ့ စာ ရေးသူ အကိုတစ်ယောက်လိုလေးစားတဲ့ မကြာသေးမီက ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဒုဝန်ကြီးဟောင်း Dr. မျိုးမြင့် အတွက် ရည်စူးထားတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။ ဒီကဗျာလေးမှာ punctuation များများမပါပေမဲ့ အဆုံးနားမှာ comma လေးသုံးထားပုံကို လေ့လာကြပါ။
Kiss Formula = keep it Short and Simple
The Torch Bearer is Dead
The torch bearer is dead.
For years he held the torch high
Passed on by those who went before
Especially the two architects of Myanmar’s foray into the English language
Saya Han Tin and Saya Thiha Ha
With true passion and integrity
Withaheart larger than life
He went about his task of educating the Myanmar masses
No small feat in the face of challenges
A regime more intent on keeping power than doing good
Leaders trying to enrich themselves at the expense of the nation
He slogged on, focused on his job, dedicated to his dream
Overcoming extreme obstacles in his path
Holding the torch high with pride and with hope
who will bear the torch in his place?
(In memory of the late Dr.Myo Myint, who passed away recently)
ဖတ်မှတ် ဆေ့ယူသွားပါသည်။ လေ့လာစရာတွေကတော့ မကုန်နိုင်ပါပဲ….
ဖုန်းနဲ့ ဖတ်ရတာ ဆိုတော့ စာလုံးတွေ စီထားပုံက သိပ်အဆင်မပြေ။
pdf ဖိုင်လေးပါ တွဲ ထည့်ပေးရင် ကောင်းမယ်